teraka randriantsoa: Carte grise-fiara. Novana ho “biométrique”
(21-06-2013) - '' Efa ny tontolon'ny ''informatique'' no anamboarana ity '' carte grise ''- 'ny fiarakodia vaovao ity. Ny vola no manakaiky ilay karatra amin'ny nanamboarana azy ary misy '' base de donnée '' ka tsy hay sandohana na adika intsony.
Any amin'ny laboratoara vao fantatra ny momba ny karatra tsirairay, rehefa jerena amin'ny ''ultra violet''. Misy fiarovana azy io telo miantoana ihany koa izany amin'ny maha- '' biometrique '' azy '', hoy ny teknisiana malagasy iray ;izay miasa amin'ny orinasa Cetis Madagascar raha nanazava ny momba ity karatry ny fiarakodia vaovao izay miasa eto amintsika ity nanomboka omaly.
'' Tsy azo adika no sady tsy hay sandohana ka hialana amin' ny hosoka sy halatra fiara misy eto amintsika ary ny fahasahiranan'ny olona mividy fiara amin'ny fikarakarana taratasim-pirakodia no antony nanovana azy ity ho ''biometrique''. Efa nahazo ny fankatoavana avy eny anivon'ny Governemanta ihany koa moa ny hanovana azy ity eto Madagasikara'', hoy ny Ministra Florent Rakotoarisoa.
Noho ny fiaraha-miasa amin'ny orianasa Cetis any Slovenia sy ny fanjakana ary ny Minisiteran'ny ati-tany no nahavitana azy ity. Ny firenena any Eropa sy aty Afrika no efa mampiasa ny '' carte grise numerique ''. 30 dôlara na 60 000 Ar no tetibidin'ity ''carte grise '' vaovao ity. Nomarihan'ireo tomponandraikitra moa fa mbola manankery tanteraka ny karatra efa niasa teo aloha. Tena hanafoana ny halatra fiara eto amintsika tokoa ve ny fampiasana azy ity?